Muxuu u xoogeystay ololaha xijaab diidka ah ee ay wadaan haweenka iiraan? - BBC News Somali
Muxuu u xoogeystay ololaha xijaab diidka ah ee ay wadaan haweenka iiraan?
Qolooyinka muxaafidka ayaa waxay doonayaan in sharciga la sii adkeeyo
Shan sano ka hor ayay haweeneyda u dhalaty Iiraan Masih Alinejad waxay billowday ololaheeda, kaddibna waxaa ololahaasi ku soo biiray kumannaan haween ah, iyaga oo ka soo horjeeda xijaabka waajibka ku ah haweenka Iiraan ama qamaarka madaxa ay dumarku ku hagoogtaan. Arrinta ayaa waxay noqotay mid si weyn u qabsatay baraha bulshada.
Waxay u arkaan inay tahay xorriyad ay doonayaan iney dumar badan oo dalkaasi ku nool helaan. Xirashada xijaabka ayaa ah mid waajib ku ah haweenka dalkaasi tan iyo markii uu dhashay kacaanka Iraan sanaddii 1979.
Masih Alinejad ayaa sawir laga qaaday shan sano ka hor iyada oo timaheeda aysan asturnayn ku soo bandhigtay baraha bulshada.
Sida oo kale dumar badan ayaa iyaguna ku dhiirraday iney sidaa oo kale sameeyaan.
Tallaabadaasi ayaa waxaa ka dhashay olole looga soo horjeedo amarka dawladda ee khasab ka dhigaya haweenka inay xijaabka xirtaan.
Xigashada Sawirka, My Stealthy Freedom
Haween Iiraaniyiin ah oo xidhan qamaarka cad oo astaanta ololaha xijaab diidka ah
Masih waxay leedahay taageerayaal ka badan 2.5 million.
Buug ay qortay oo ay ugu magac dartay 'dabeysha timahayga', ayaa waxay si weyn wax uga qortay qoys ay ku tilmaantay inay yihiin kuwa mayal adag oo ay ku soo dhex kortay oo ka soo jeeda tuula yar oo waqooyiga Iiraan ku taallo.
Gabadhan waxay iisu aragtaa iney tahay "mid mar waliba dooneyso in dadka aan codkooda la maqal ay u noqoto codki ay ku hadli lahaayeen"
Ololaheedana ma noqon mid si dhib la'aan u dhaca.
Wariye ka tirsan TV-ga qaran Iiraan oo lagu dhaliilay Xijaab la'aan
Masih, ayaa masaafuris ku joogtay dalka Mareykanka tani iyo 2009. Kuma dhacdo inay Iiraan dib ugu labato iyadoo ka cabsi qabto in la xiro.
Waxay intaa ku dartay iney farriin dhawaan uu xubin ka mid ah ciidamada dowladda tabaruca ugu shaqeeya ee loo yaqaanna Basij uu Facebook ku soo gaarsiiyey uu ku yiri "waan ku qalayaa... jidhkaaga intaan googooyo ayaan reerkaaga u soo dirayaa."
mar la weydiiyay iney joojin doonto ololahan ay waddo, waxay ku jawaabtay "lagama yaabo"."Mudda 40 sana ah ayaa waxay sheegayeen inaan la joogin xilliga ku habboon in laga hadlo xuquuqda haweenka, balse hadda arrimaha haweenka gacanta kuma qaban karaan"
"Dolwadda oo dhan waxay hadal haysaa xijaabkan qasabka ah, taa waxay na tusineysaa awoodda ay haweenka ololaha ka midka ah ay leeyihiin"
Gacan ku qabashada adag
Jawaabta ay xukumaddu ka bixisay arrintan waa mid aad u adag.
Laga soo billaabo December 2017, haween mudaharaadayaal ah oo ka badan 35 ayaa caasimadda Tehran oo keli ah lagu xidhay. Booliskuna wuxuu digniin ku bixiyey haweenka ka qayb qaato mudaharaadyada xijaabka looga soo horjeeedo ay muteysan doonaan 10 sana oo xarig ah.
Dhammaadkii bisha April, haweeney ayaa waxaa qabtay askari ka tirsan booliiska anshaxa ee magaalada Tehraan iyadoon xirnayn jalbaab. Waxaana la duubay muqaal isagoo dharbaaxaya gabadha.
Waxaana muuqaalkaasi lagu baahiyey cinwaanka ay Masih Alinejad ay ku leedahay Instagram. Waxaana daawatay dad ka badan 3 million oo qof waxaana ka tala bixiyay 30,000 oo qof.
Mid ka mid ah xubnaha ugu firfircoon dhaqdhaqaaqaasi oo weli ku sugan Iiraan, waxay sheegtay ololaha Masih inuu yahay "mid isu keenay dadka caadiga ah si ay dolwadda arrinta ay jawaab uga bixiso"
Waxay intaa ku dartay "anigu markastaba waxaan leeyahay xijaab xirasho iyo timaha oo la dado ma aha arrinta, balse waxa aan ka hadleyno ayaa waxay tahay sharafta bani'aadamino."
Niloofar waxay ku doodeysaa "laga billaabo marka uu sanadkii hore billaawday ololaha 'White Wednesdays', haweenku iney u muuqdaan kuwa sharaf iyo geesinimaba helay.
"Haweenkan ma sugayaan in la qaado sharciga xijaabka, balse waxay doonayaan iney iska dulqaadaan" ayey tidhi.
Shiva Rahbaran oo ah qoraa ku sugan London ayaa waxay sheegeysaa xukumadda Iiraan iney joojin weyday arrintan isa soo tareysa ee looga soo horjeeda Xijaabka.
"Xeelad kasta oo uu kacaanka Islaamiga dajiyo iyo dadaal kasta oo ay galaanba ay sii adkeyneyso ololaha haweenka ay ugu jiraan xorriyad iney helaan''